Mmetụta na ndị nche na-eji Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
Na Esia, mpaghara ebe ndị uwe ojii na-eyi kamera mmadụ na-abawanye ngwa ngwa iji belata ime ihe ike n'etiti ndị uwe ojii na ụmụ amaala. A kwenyere na mgbasawanye nke teknụzụ igwefoto ahụ ga-eme ka ọrụ ndị uwe ojii dokwuo anya, si otú a mee ka nchekwa ụmụ amaala ka mma. Agbanyeghị, enwere ntakịrị data enwere ike iji dị ka ntọala maka ịkwalite nchekwa.
Ndị uwe ojii kwenyere na igwefoto a na-eyi n'ahụ nwere ike ịkwalite ikike ndị uwe ojii ịchọ na ịkwalite nghọta na ịza ajụjụ maka ọrụ ndị uwe ojii. Fọdụ ndị uwe ojii nwere kamera yiri onwe ha iji nwalee arụ ọrụ ha. Ndị otu uwe ojii ahụ gosipụtara afọ ojuju na nsonaazụ ule ahụ n'ihi na ihe eserese nke igwefoto ahụ na-ese dị mma karịa ngosipụta ọnụ.
Fọdụ ndị mmadụ na-eche na igwefoto ahụ eyiri nwere ike ime ka ndị uwe ojii chọọ n'ụzọ ọzọ ebumnobi, aza ajụjụ na nghọta, wee mezie ka ndị mmanye iwu na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị otu a na-echegbu onwe ha na ebe ndị uwe ojii nwere ike ikpebi "ma ọ bụ na ịdekọ na mgbe ha ga-amalite ndekọ" na ndị uwe ojii ahụ n'onwe ha anaghị edekọ, igwefoto ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike igosipụta ihe ahụ zuru oke na n'ụzọ ziri ezi. Ọzọkwa, igwefoto a na-eyi n'ahụ nwere ike ịnakọta ozi na data karịa ka ọ dị mkpa maka ndị mmanye iwu, na-ebute nchegbu gbasara nsogbu nchekwa nzuzo.
Inwekwu nchekwa maka ụmụ amaala na ndị uwe ojii?
Na mbido, ndi omebe iwu nwalerele iji ozu-nwale. Ekwesịrị inyocha njikwa ahụ ma ọ bụrụ na teknụzụ ahụ etoalalarị. Ma kedu ihe kamera ahụ kwesịrị ime? Anyị na - elele teknụzụ ọhụụ site na akụkụ pụrụ iche.
Ihe ndi eji eme agha bu ihe kwesiri ichebe ndi uwe ojii site na mbuso agha
Ejirila ihe onyonyo mee ugbu a na ihe eji eme onwe ya ka ichekwa ihe ndi mmadu n’aka ndi omekome. Ọ bụrụhaala na ngalaba ihe ngosi naanị na-egosi mpaghara nkeonwe, amachibido iji ya. Maka ikiri vidio na mpaghara ọha, enwere nnukwu mgbochi, nke na-amanye Federal Council ikpebi iji igwefoto ahụ.
Enwere ike ịmata ndị uwe ojii na-eyi igwefoto site na iji akara ede ihe bụ “Ndekọ vidiyo”. Otú ọ dị, igwefoto anaghị arụ ọrụ na-adịgide adịgide. Naanị n'ihe banyere esemokwu na-abịanụ, ndị ọrụ gọọmentị na-agbanye kamera ndị ahụ.
N'otu oge ahụ, ndị na-akwado teknụzụ nchekwa ọhụrụ na-ekwusi ike na kamera ekwesịghị naanị chebe onye uwe ojii n'onwe ya. Ebe ọ bụ na ekwuputala ugboro ugboro na ime ihe ike ndị uwe ojii karịrị akarị, ekwesịrị iji kamera ahụ mee nkwupụta nke ndị uwe ojii n'ụlọ ikpe dịka akaebe. Ọ ga - ekwe omume inyocha ma ihe ndị isi ọrụ ahụ dị n'ezie na - enweghị usoro nhazi.
Mmetụta dị a doaa ka ndị na-ahụ maka ọrụ na-atụ anya site n'iji ihe a na-ahụ anya?
Ime ihe ike na enweghị nkwanye ùgwù maka ndị uwe ojii
Ndị na-ahụ maka anụ ahụ kwesịrị inwe ihe mgbochi ga-egbochi ndị dara iwu ime ihe ike
Na oge mberede, vidiyo vidiyo na esemokwu iwu kwesịrị ịbụ ihe akaebe
Akpụkpọ ahụ ga-ewetakwa ndị uwe ojii na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-eme ka ha na-akpa àgwà dị mma
Na mkpokọta, dabere na ahụmịhe nke obodo na esenidụt, ndị uwe ojii na-eji igwefoto ahụ nwere eyi nwere uru ndị a:
(a) ordingdekọ ihe omume mere ịdabere na ya: Ihe nkiri vidio ndị a nwere ike ime ka ndị uwe ojii nwekwuo ike ịhụ na ọha na eze tụkwasịrị ndị uwe ojii obi n’ihi igwefoto ndị a na-eyikarị n’ahụ́ ma ọ bụ ebe a na-ese vidio;
(b) Mee nchọpụta na mkpesa: Ndị uwe ojii nwere ike iji eserese igwefoto eyi na-egosi dị ka ihe akaebe maka nyocha ndị omempụ. Ọ bụrụ na ndị uwe ojii kpebiri ịgba akwụkwọ, a ga-eji irighiri ihe ndị dị mkpa iji nye akaebe na ụlọ ikpe;
(c) imezi mkpebi nke mkpesa ma ọ bụ ịgba akwụkwọ: Ihe osise a na-eji eserese ahụ na-eyi nwere ike belata esemokwu na akaebe ma mee ka mkpebi nke mkpesa dị ngwa ịgba akwụkwọ;
(d) Mgbagha esemokwu: Igwefoto diiri ahu na –eme ka aru ike dika ihe nwere ike mgbochi ma nwekwa ike oke mgbochi omume. Mgbe ọha na eze matara na a na-eme vidio ha, ha na-ejikarị nwayọọ wee si otú a belata esemokwu dị n'etiti ndị uwe ojii na ndị nkịtị.
N’aka nke ozo, iji igwefoto ndi mmadu n’aru na mmanye iwu emeela ka ndi mmadu nwe anya ma nwee obi abua, tinyere:
(a) Ndị uwe ojii nwere ike ịbawanye ike n’ike n'ọnọdụ ụfọdụ: Dika ihe omumu si di, na mmekorita ndi uwe ojii na ndi mmadu, ma oburu na ndi uwe ojii nwere ikike karie ikpebi mgbe igbanye ma gbanye igwe onyonyo eyi, ma obu mee ka ndi uwe ojii jiri ohere.
(b) Okwu nzuzo: Nke mbu, ebe ndi uwe ojii nwere ikike zuru oke iji kpebie mgbe ịmalite ma kwụsị ndekọ, enwere ụjọ na ndị uwe ojii nwere ike iwere ọtụtụ ọnya na-esiteghị na mpụ. Nke abuo, ndi oru uwe ojii nwere ike ese ihe omuma nke obi ojoo nke ndi mmadu ojoo na ndi mmadu tinye aka na nzoputa ma obu ihe mberede nke igwefoto eyi ahu. Na ngwụcha, enwere nchegbu banyere iji igwefoto nwere igwe nwere ike mebiri mmadụ ma ọ bụ nwee ikike iwu dị ka ụfọdụ (dịka ndị akaebe, ndị ozi nzuzo, ndị o metụtara, ndị chọrọ iyi uwe maka nyocha, wdg).
(c) Ikike ịnweta data nkeonwe: Dabere na iwu nchedo data nkeonwe dị mkpa, ndị otu nwere ike ịnweta vidiyo vidiyo nke igwefoto vidiyo obere nwere foto ha. Dika ndi ochichi nwere ike choro ikpuchi ihe osise ndi n’emeghi na nbudata vidiyo a, nke a nwere ike ibunye ndi uwe ojii ibu ndi ozo.
Na nzaghachi nye nchegbu ndị a dị n'elu, enwere "ntuziaka doro anya ma sie ike" na-achịkwa iji igwefoto vidiyo eserese:
(a) Vidio a dabere na ihe omume: enwere ike iji igwefoto ahụ na-eyi na "ihu esemokwu" ma ọ bụ "ọ bụrụ na enwere mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze nke mere ma ọ bụ nwere ike ime";
(b) Adgba ndị ahụ n’ihu vidio ahụ: Ndị uwe ojii na-eji kamera ahụ anya ga-eyi yunifọm ma kpọgidere kamera ahụ yi n’elu otu. Ọ baghị uru na gburugburu ebe obibi ebumnuche, ma ọ bụghị, ndị uwe ojii ga-agwa ndị ọzọ tupu ha ebido ndekọ ahụ. N’ime ndekọ ndekọ, ohere igwefoto igwefoto nwere ohere nke na-acha ọbara ọbara, na ihuenyo egosipụtara ga-eme ka ndị otu ahụ mara na a na-edekọ ya ma nwee ike ịhụ ihe ndekọ ahụ. Mgbe onye uwe ojii ahụ malitere idekọ, ọ ga-ebu ụzọ dekọọ aha ya, oge na ebe a ga-ese vidio ahụ, na nkọwa nke ihe omume a ga-edekọ;
(c) Ebibie vidiyo vidiyo na-abaghị uru maka ule ahụ: A na-atụgharị obere vidiyo echere na nyocha ahụ gaa na CD-ROM abụọ, otu ga-eji dị ka ihe akaebe nke ọzọ ga-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ nke ọrụ maka nyocha ọzọ. A ga-ebibi vidiyo vidiyo nke na-edoghị nyocha ma ọ bụ ihe akaebe ọ bụla banyere uru mgbe ụbọchị 31 gasịrị site na ụbọchị ntinye; na
(d) Ihe nzuzo achọrọ: Dabere na Iwu Nkeonwe (Nzuzo), ọha nwere ikike ịrịọ ka ha tinye na data nkeonwe ndị uwe ojii debere, tinyere vidiyo vidiyo. A ga-ahazi arịrịọ niile dị otú a.
Mmụta a tụkwasịrị obi na-efu efu ugbu a, nke na-egosi na ojiji nke Body-cams na-eweta mmetụta achọrọ nke ndị ịlụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Nke kachanụ, ndị Minista na-ahụ maka ime obodo na ndị uwe ojii na-enwe olile anya na ojiji nke ndị na-eme cam-ahụ ga-eme ka ndị uwe ojii nwekwuo nchekwa. Yabụ, mba ndị ọzọ dị na ụzọ iche echiche a na-agba mbọ, nke gosipụtara iji ihe ozu ahụ.
Nzuzo 6800 1 Echiche Taa